अध्यक्षको भनाइ - Asthashree Savings and Credit Cooperative Society Ltd.
आफ्नो कार्य क्षेत्रमा सहकारी माध्यमबाट वित्तीय तथा गैर वित्तीय क्रियाकलापको माध्यमबाट सदस्यहरुको जीवन स्तर उठाउदै समुदायको दिगो बिकासमा हाम्रो पनि भूमिका रहोस भन्नाको खातिर वि.स. २०६२ जेष्ठमा स्थापित सहकारी संस्था हो । हरेक मानिसको जीवनमा वित्तले बिशेष भूमिका खेली रहेको हुन्छ । सामान्य घर खर्च देखि स्वआयआर्जनको क्रियाकलाप गर्न वित्तीय आवश्यक पर्दछ । सदस्यको वित्तीय समाधानकोलागि बचत र ऋण परिचालनद्वारा सहयोग पुर्याउने हाम्रो प्रमुख भूमिका रहनेछ । स्थानीय समुदायमा एउटा नमुना, अनुशासित र सृजनशील सहकारी बनाउन कटिबद्ध रहेका छौ । यस कार्यमा शेयर सदस्य, समुदाय, सम्वन्धित निकाय र सरकारी नीति नियमको विशेष भूमिका रहेको हुन्छ । आज सम्म हाम्रा शेयर सदस्यहरुबाट अपेक्षाकृत भूमिका र सहकार्य राम्रो पाएका छौ ।
स्थापनाकाल देखि अहिले सम्म कहिल्यै पनि कारोबारमा नोक्सान हुन दिएका छैनौ। संस्थालाई परिमाणमुखी भन्दा पनि परिणाममुखी बनाउन सधै ध्येय राखेका छौ। सहकारीको मूल मर्मसंग बाझिने सवालमा कहिल्यै संझौता गरेका छैनौ। थोरै बचत संकंलनबाट कारोबार शुरु गरिएको भएता पनि आज हामीले करोडौ रुपियाको कारोबार गर्न सफल भएका छौ । छोटो समयमा आफ्नै भवनमा कार्यालय संचालन गर्न सफल भएका छौ । यी सबै शेयर सदस्यहरुको माया, लगाव र सकारात्मक सहकार्यले गर्दा सम्भव भएको हो । र आगामी दिनहरुमा यस्तै सहकार्य हुनेछ भन्ने आशा लिएका छौ ।
संस्थालाइ नीति, बिधि र प्रविधिबाट संचालन गर्न मेरो प्रयास रहनेछ । सदस्य संख्या विस्तारलाई बिशेष महत्व लिई तदअनुरुप कार्यक्रम तथा योजना गराइनेछ ।
सफलताको कुनै सिमा हुदैन I सहकारी माध्यमबाट समुदायमा अझै धेरै कार्य गर्न बाँकि रहेको छ। समुदायमा अझै प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्दै यस साकोसलाइ राष्ट्रिय स्तर हुदै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान गराउन थुप्रै काम गर्न बाँकि नै छ। यस अभियानमा सम्पूर्ण सदस्य, समुदाय र सरोकार निकायको अहम भूमिकाको सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने आशा र अपेक्षा गरेको छु ।
Copyright © 2018 Asthashree Savings and Credit Cooperative Society Ltd.. Designed by Cityphone Group